को बन्ला महासचिव : कांग्रेसमा गगन या विश्व र एनआरएनएमा गौरी या केशव ! – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
प्रकाशित: २०७८ भदौ २६ गते ३:५३
गोकुल ढकाल – तीजको समापन हुँदैंछ । चरी जेलैमा भाईरल । तीज मान्नेहरु कोही नहोलान, जसले चरी जेलैमाको टिक्टक बनाएनन ! ओलीबाले पनि दर खुवाए । माधव कमरेड पार्टी फुटको तर खांदैछन । यता कांग्रेसलाई एमसिसी घांडो भएको छ । कांग्रेसलाई नै थाहा छैन शायद, एमसिसी फाईदाको लागि हो वा घाटाको लागि । ज्योतिषी बाजेको जोखना मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई पून: प्रधानमन्त्री बनाउंछ या राजनैतीक अवसानको बाटो धकेल्छ, एमसिसीप्रती सरकारले लिने निर्णयले बताउनेछ ।
भाग्यमानी देउवाको दशैं तिहार राम्रो हुनेछ । बुढानिलकन्ठ मन्दिर छाडेर पोहोर भन्दा बढी कार्यकर्ताहरु नेता बनाईदिन आशिर्वादे टिका लगाउन बुढानिलकन्ठ निवासमा लाम लाग्नेछन । पार्टीको महाधिवेशनमा नेता बन्न ध्यान भएकाहरु पौडेल, कोईराला निवास भन्दा बुढानिलकन्ठ दरवार धाउनेछन । नेपाली न हुन, अझ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता । जता नेता, उतै केटा !
कसले थाम्ला कांग्रेस , गगन या विश्व ?
कांग्रेसीहरुलाई कोरोना कहर केही कम भएर पारिवारिक भेट्घाटको तारतम्य मिलेको बडादशैं र तिहार भन्दा मंसीरमा हुने पार्टीको महाधिवेशन बढी महत्वको बिषय छ । हुन त राजनीतिमा लागेकाहरुलाई आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन भन्दा ठुलो पर्व त के नै हुन्छ र ? त्यसैले होला, सभापती र महामन्त्रीका आकांक्षीहरुका भनाईले सामाजिक संजाल भरिएका छन । कम फुट्ने तर आन्तरिक रुपमा कहिल्यै नजुट्ने नेपाली कांग्रेसमा दोस्रो पुस्ताले पार्टी हांक्ने जिम्मेवारी यसपटकलाई भने शायदै पाउनेछन । यो कुरा, सभापतीमा उठेका कल्याण गुरुङ्गलाई पनि थाहा होला ।
आन्तरिक विवाद जे जस्तो भएपनी नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीमा कसले बाजी मार्ला, त्यो चाँही रोचक हुनेछ । सिटौलाबासंग मिलेर आफ्नै ससुरालाई हराएका गगन थापाले अस्ति नै आफु महामन्त्रीमा उमेद्वार हुने बताएका छन । साथमा उनका गुरु तथा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि महामन्त्रीको उमेद्वार हुने चर्चाले कांग्रेसभित्र अर्को दशैं शुरु भएको छ । वाकपटुताका खानी शर्मा र थापाको उमेद्वारीले पार्टीमा नयाँं संचार जागरण गराएपनी दुई मध्य एक्ले हार्ने र समिकरणको राजनीतिले मनोनित महामन्त्रीमा नपर्ने सम्भावनाले शर्मा र थापा मध्य एक गुमनामा हुने डर पनि छ । किनकी कांग्रेस यस्तो पार्टी हो, जहाँं सकृय भईरहन कि पैसा कि पद अबश्यभावी छ ।
कांग्रेसमा महामन्त्रीमा चर्चा भएका दोस्रो पुस्तका उमेद्वारहरुमा विश्वप्रकाश शर्मा उमेर, राजनिती र चर्चाका हिसाबले जेठा हुन, गुरु हुन । अझ कांग्रेसी भाषामा ‘आदरणीय दाई’ हुन । शर्मा नेविसंघको सफल अध्यक्ष हुंदा थापा केन्द्रिय सदस्य थिए । नेविसंघका अर्का अध्यक्ष प्रदिप पौडेल यी तिनै हिसाबले माईला हुन । एक भोटले अस्कलमा स्ववियु सभापती जितेर चर्चित बनेका पौडेल पनि थापाका ‘प्रदिप दाई’ हुन । पार्टीले दिएको अधिकारिक प्यानललाई चुनौती दिंदै बिद्रोही उमेद्वार बनेर त्रि-चन्द्र स्ववियु सभापती बनेका थापालाई वाककला र संयोगको आन्दोलनले पार्टीमा चर्चित बनायो ।
तर, एकै पुस्ताका यी होनहारहरुलाई प्रकाशशरण महतहरुले कसरी थेग्छन, त्यो महाधिवेशनले बताउला । वडा समितिको निर्वाचन सकेको युवाहरु बिजयी भएको नतिजा हेर्दा अब पार्टीमा बुढाहरुलाई रुखको चौतारीमा बसाउंदैछन भन्ने चांही बुझिन्छ ।
एनआरएनएमा कसको होला पल्लाभारी, गौरी या केशब ?
आगामी अक्टोबरमा एनआरएनए आईसिसीको निर्वाचन हुंदैछ, नयाँ कार्यसमितिको लागि । राजनीति यस्तो पनि हुंदोरहेछ कि, बिगतका निर्वाचनहरुमा एनआरएनएमा अध्यक्ष को बन्ने भन्ने मुद्दाले बढ्दा चासो राख्थ्यो । संयोगले नेपाली कांग्रेसमा देउवा या पौडेल वा कोईराला सभापती बन्ने भन्दा महामन्त्रीमा गगन वा विश्वले जित्लान भन्ने बिषय बढ्ता चासो छ । यता, जनसंपर्कमा समर्थकहरुको बोलवाला रहेको एनआरएनएमा पनि कुमार पन्तले दोहोर्याउलान, बद्री केसीले जित्लान वा कुल आचार्यले जित्लान या टिकीरहिन भने रबिना थापाको हातमा एनआरएनएको तालाचाबी जाला भन्ने बिषय भन्दा पनि ‘आगामी महासचिवमा गौरीराज जोशी वा डा. केशब पौडेल’ मध्य कसले जित्लान भन्ने शिर्षक ज्यादा चलेको छ ।
आईटी ब्यवसायबाट अमेरिकामा स्थापित नेपाली बिल गेट्स गौरीराज जोशी पहिले नेपाली समाज टेक्सासमा सकृय थिए । परिश्रमले सानै उमेरमा अकल्पनीय व्यवसायिक सफलता हासिल गरेका जोशी २०१७ – २०१९ को लागि एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्ष लड्ने चर्चा अमेरिकन नेपाली सामुदायिक ईतिहासमा सम्भवत: सबैभन्दा चर्चित थियो । अमेरिकामा नेपाली बिल गेट्स बनेका जोशीको पैसाको पछी नेपाली समुदायका कथित अभियान्ता भनौदाहरु लागेका थिए वा त्यो बेला महापुराण मार्फत नेपालीहरु सकृय रहेका शहरहरुमा सामुदायिक केन्द्र बनाउन चलेको होडबाजीमा जोशीले पैसा हाल्दिन्छन भनेर चाकरी गरेका थिए, तर जोशी एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्ष लड्ने चर्चा, उनको चुनावी सभामा जुटेको जमात साच्चै भयंकर थियो ।
अमेरिकी नेपाली समाजमा बनेका, बन्दै गरेका र बन्ने भनिएका सबै सामुदायिक केन्द्रका लागि भनेर जोशीले ५ हजार डलर दान गरिसकेका छन । बोलेको कुरा पुर्याउने शान्त स्वाभावका जोशीले २०१७ मा एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्ष पद नलड्ने निर्णय गरे । उनको लागि ज्यान दिएका, पैसाको आशमा पछी लागेका र संरक्षणको आश गरेका भरौटेहरु जोशीको त्यो निर्णयले रिसाए । एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्ष पद त्याग्नको लागि जोशीले डा. पौडेलसंग आत्मसमर्पणको सम्झौता गरे भन्नेहरु पनि अहिले छन । तर एनआरएनए अमेरिका भन्दा शक्तिशाली पद ‘अमेरिकाज क्षेत्रको संयोजक’ पद जोशीले लिए ।
त्यो बेलाको उनको हैसियत साच्चै शक्तिशाली थियो । गोजीमा टन्न पैसा भएका, उच्च ब्यक्तित्वले सिंगारिएका कम बोल्ने जोशी अमेरिकाज संयोजक हुंदा बहुचर्चित २०९३ सदस्यीय विवादित निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने थियो । साधारणतया, एनआरएनए अमेरिकाको आफ्नै नियम छ,दाजु आईसिसीको बोली मान्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । भाई जतिसुकै बाठो भएपनी परिवारमा दाईको कुरा नै बाउले सुन्छन । सुनील साहको पालाको निर्वाचन आईसिसी वा अमेरिका एनआरएनएले जे माने भने पनि तत्कालिन अमेरिकाज संयोजक जोशीले ‘यो चुनाव हुन्न’ भनेको भए हुंदैनथियो । यसका बहसका आफ्नै बिषयहरु होलान । तर, जोशीले हांकेको क्षेत्रीय संयोजक्को पद अहिलेको जस्तो कांतर थिएन । आईसिसीका धेरै नेताहरुसंग व्बवसायिक नाता रहेका जोशी एनआरएनए अमेरिकामा आबद्ध नहुंदै पपुलर थिए ।
वर्तमान कार्यसमितिमा सचिव पदमा पपुलर मत लिएर जितेका जोशी आसन्न निर्वाचनका लागि महासचिवका शक्तिशाली उमेद्वार हुन । नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा जस्तै एनआरएनएमा चर्चित जोशी थापा जत्ती वाककला नभएपनी सालीन तवरका कुटिल खेलाडी मानिन्छन । एनआरएनएमा आफ्नो अबद्धता पछी हार नबेहोरेका जोशीको प्रतिस्पर्धा डा. केशब पौडेलसंग हुनेछ । कुनै बेला सामुदायिक साझेदार जोशी र पौडेलकै छत्र छायांमा छ, एनआरएनए अमेरिका । एनआरएनए अमेरिका भनेकै जोशी र पौडेलको लडाईंं हो । लामो समयदेखी लागेका डा. पौडेल भन्दा जोशीले छोटो अबधीमै अमेरिका लगायत संसारभर पपुलारिटी भने बटुलेकै छन ।
साविकका सचिव जोक्शी महासचिव पदमा आकांक्षी हुनु धेरैले स्वाभाविक मानेका छन । कक्षा दुईमा अध्ययनरत बिद्धार्थी तीनमा उक्लन्छु भन्नुमा उसको चाहनालाई बिद्धालयको नियमले बाध्दैन । पार्टीगत राजनीतिमा डा. पौडेलभन्दा कम विवादित जोशी वर्तमान उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष पदका प्रत्यासी डा. बद्री केसी र रबिना थापाको समुहबाट महासचिव पदमा लड्दैछन ।
नेविसंघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य डा. केशव पौडेल एनआरएनए अमेरिकाको दुई बर्षे कार्यकालका सभापती हुन । प्रल्हाद केसीको पालामा शुरु भएको एनआरएनए अमेरिका, शिव राई हुंदै खगेन्द्र जिसीको पालामा आईपुग्दा केवल बामे सरेको थियो । दुधे बालक एनआरएनए अमेरिकालाई बाहिर ल्याउन सबैभन्दा ठुलो भूमिका डा. पौडेलको छ । चार बर्ष उनको कार्यकालमा हरेक दिन एनआरएनए अमेरिकाको नयां समाचार बजारमा आउंथ्यो । विवादित बिषय होस् वा राम्रा काम, डा. पौडेलको कार्यकालमा अमेरिकामा एनआरएनए अमेरिका छ भन्ने बनेको चाहीं सत्य हो ।
२०१७ मा एनआरएनए अमेरिकाको सभापतीमा गौरीराज जोशी लड्ने चर्चाले गौरीमय अमेरिका हुंदा जोशीलाई पौडेलले थमाए । दोस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष बने । कुनै बेलाका घनिष्ठ मित्र जोशीसंग उनी सभापती बनेर जोशी यता क्षेत्रीय संयोजक बन्दा सम्बन्ध चिसियो । ‘आफुलाई विरोध गर्ने पात्र’ चिन्ने बित्तिकै अर्कै ब्यवहार गर्ने भनिने डा. पौडेलको बानीले जोशीसंगको सम्बन्धमा दरार ल्यायो । जोशी एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्ष भन्दा माथीको क्षेत्रीय संयोजक, डा. पौडेल अमेरिका अध्यक्ष । पदले नै ठुलो बनाएको जोशीलाई आफु ठुलो भन्ने रवाफ, एनआरएनए अमेरिकाको दोस्रो कार्यकालमा जोशीलाई मिलाएर आफु अध्यक्ष बनेको घमन्ड पौडेललाई ।
लगानी, चर्चा र सालीनताले आईसिसीमा राम्रो सम्बन्ध बनाएका जोशी र राजनिती, शिक्षा र सकृयताले चर्चित बनेका पौडेलको ब्यक्तित्व अमेरिकी नेपाली समाजमा नबाझियोस भन्ने थियो । संस्थामा लागे पछी छिर्ने राजनिती र सम्बन्धले त्यो हुन दिएन । एनआरएनए अमेरिकाको क्षेत्रमा छोटो समयमा चर्चा बनाएका जोशीको पपुलारिटीले आजित डा. पौडेल आफ्ना तत्कालिन उत्तरआधिकारी सुनील साह अध्यक्षको उमेद्वार हुंदा विवादित २०९३ भोट बिषयले ‘अमेरिकामा एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचन हुने वा नहुने, निर्णय गर्ने अधिकार वा शक्ती’ जोशीले आफ्नो हातमा लिए । कुमार पन्त आईसिसीमा लड्ने चर्चा, र त्यो समुहमा राम्रो प्रभुत्व बनाएका जोशीको पक्षमा आईसिसी देखियो ।
सुनील साह एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भए । कार्यकाल सकिएका डा. पौडेल आईसिसीको महासचिवमा चुनाव लड्ने चर्चा भयो । यता जोशी स्वाभाविकले सचिवमा । समिकरणले हो वा महत्वाकांक्षाले काठमान्डौंको अन्नपूर्ण होटेलमा शेष घलेले गरेको कार्यक्रम अगाडी डा. पौडेलले उपाध्यक्ष पदमा लड्ने भनेर पत्रकार सम्मेलन गरे । आफुले भनेको मान्ने तत्कालिक प्रतिनिधी छनौट समितिका संयोजक डा. अर्जुन बन्जाडेको छानेको डेलिगेट्समा चाकरीका परेका करिव १२ जना प्रतिनिधी नेपाल गएनन । आफ्ना पक्षलाई चिढ्याएका डा. पौडेल, डा. बन्जाडे र सुनील साहको ‘डेलिगेट्समा चाकरी बाहेक आफ्ना सहयोगीलाई गरेको अपहेलना’ र ‘नेपाल जान नसक्ने डेलिगेट्स’ छनौटले अमेरिकाकै भोट्ले थोरै अन्तरले डा. पौडेलले उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन हारे ।
त्यसपछी एनआरएनए अमेरिकाको संरक्षक बनेका डा. पौडेल, डा. यादब पन्डित, एमाले भएर पनि कांग्रेसी बनेका विश्व बराल, जतापनी चाहर्ने बेद खरेलहरुको समुहले डा. अर्जुन बन्जाडेलाई धोखा दिदैं बुद्धी सुवेदीलाई एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्ष उठाए । निर्वाचन जिते सुवेदीले । आफु आईसिसी उपाध्यक्ष लड्दा पौडेलको समुहले गरेको जस्तै गल्ती गर्‍यो कृष्ण लामिछाने समुहले । थोरै अन्तरालले लामिछाने चुनाव हारे । लामिछानेका वरिष्ठ समर्थकहरुले पनि उनलाई भोट् हालेनन । खैर, अब ढिला भयो ।
डेलिगेट्स विवादले रन्थनिएको एनआरएनए अमेरिकाको निर्णयक हुने भोट्मा आधिकारिकता के हो, छिट्टै थाहा होला । तर, अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकामा डा. पौडेलको मत बढी हुने देखिन्छ । यही बलमा उनी महासचिवका कमजोर उमेद्वार भने होईनन । युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यजस्ता आफ्ना समकक्षी नेविसंघ नेताहरुका कारण ‘कांग्रेस’ को भोट् उनको पक्षमा जाला । सुनिन्छ, आचार्यकै कारण एनआरएनए अमेरिकाज संयोजक राजन त्रिपाठी पनि अहिले डा. पौडेल पक्षतिर छन । संयोकद्वय त्रिपाठी र आचार्य पनि समकक्षी हुन ।
तीन कक्षामा फेल भएर किन दुई कक्षामा डा. साहेब, भन्नेहरु पनि छन । दुई कक्षाबाट गएका जोशीलाई तीनमा उक्लिन दिनु भन्नेहरु पनि छन । तर झर्नेलाई भन्दा उक्लनेलाई क्लास टिचरले मार्क दिने सम्भावना पनि छ । एउटै पदमा यी दुई भिमकायहरु किन लडेका होलान भन्ने पनि छ । ती सबै अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ हो, निर्वाचन ।
हेरुम के हुन्छ !
उमेद्वारका सहयोगी, उनको समुह, सचिवालय र सामाजिक संजालको संस्कारी चरित्रले पनि त्यो उमेद्वारको चुनावी रणनिती र बिजयपथको मार्गदिर्देश गर्दछ । जोशी समुहका सहयोगीहरु प्राय विपक्षीहरुलाई तथानाम गाली गर्न रुचाउंछन, जुन महासचिवका उमेद्वार जोशीले सचाउनपर्ने बजार कुरा छन । तुलनात्मक रुपमा एकाध छाडी डा. पौडेल समुहका सहयोगीहरु बढी शान्त देखिन्छ, सामाजिक संजालमा । उनीहरु सर्कुलर जारी गरेर अगाडी बढ्छन । सर्वोच्च नेता यादव पन्डितको सर्कुलर उनीहरु विजयको माध्यम सम्झन्छन । सचिवालय दर्हो छ । आफु विचमा विश्वास छ । हल्ला भन्दा रणनितीमा उनीहरु काम गर्छन्, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता जस्ता । र त १५० को सानो अन्तरले कृष्ण लामिछानेले एनआरएनए अमेरिकाको चुनाव हारे । किनकी उनीहरुको सर्कुलेशन र सचिवालय कमजोर थियो ।